Olee Otú M Pụrụ tọghata An MKV File?
> Resource> Video>-atụ aro Software Iji tọghata An MKV File
Ọ bụ ezie na ihe MKV faịlụ bụ yiri nnọọ ka AVI, ma ọ nwere ike ịnwe a wider nso nke codec (karịsịa esiwanye-ewu ewu n'anya dị ka ndị H.264, AAC na Vorbis). Ọ bụ na-ngwa ngwa inweta ewu ewu dị ka otu n'ime ndị nkịtị ma ọ bụ ọkọlọtọ iche nke multimedia faịlụ si akpa. Otú ọ dị, ọ bụ ezi siri ike ịhụ onye ọkpụkpọ na nke ahụ bụ ike playback ọdịnaya na MKV faịlụ, ka naanị anyị obere ngwaọrụ. Ya mere, ọ bụghị ihe a na mberede na niile ma ọ bụrụ na ị na a na kpaliri njehie ozi na gị mgbalị bulite ihe MKV faịlụ.
Ị ga mkpa iji tọghata gị MKV faịlụ tupu na, ma ihe ga-abụ ihe kasị mma nhọrọ ezie? I kwesịrị tọghata online ma ọ bụ site a desktọọpụ Ntụgharị? Lelee Ndepụta nke Online Video converters dị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe atụmatụ, ịnwale Wondershare Video Converter Ultimate. Ọ bụ dakọtara maka download na ma ndị Windows na Mac arụ ọrụ usoro.
Nanị na-agụ site na nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu na gị otú ị pụrụ tọghata gị MKV faịlụ mere na ọ bụ dakọtara maka playback na gị oke nke obere ngwaọrụ.
Nanị na-eso nzọụkwụ n'okpuru iji tọghata ma ọ bụ ọbụna dezie gị videos n'ihu na-ebugote ya jidesie YouTube.
1 Import ma ọ bụ bulite faịlụ
Ị nwere ike ma pịa na + Tinye Files (site na-eme nchọgharị site na gị Obodo nchekwa) ma ọ bụ ịdọrọ-na-dobe gị faịlụ ozugbo jidesie isi interface. The uploaded faịlụ ga-neatly haziri na stacked n'elu ọ bụla ọzọ.
Extra Atụmatụ: Ị nwekwara ike ịhọrọ ibu DVD ma ọ bụrụ na ị chọrọ ike a nkwado ndabere akwụkwọ (ma a softcopy ma ọ bụ hardcopy) ma ọ bụ ọkụ gị faịlụ jidesie a DVD. E nwekwara ibu nke ndebiri wuru na-otú i nwere ike hazie gị onwe gị menu.
2 Dezie faịlụ
Ọ bụ isi ihe Jisọs oke n'etiti dị video converters! Ndị ọzọ karịa inwe ike iji tọghata faịlụ, ị pụrụ iṅomi ma ọ bụ ọkụ DVD. Ihe bụ ihe ọzọ? N'ebe ahụ bụ wuru na-video nchịkọta akụkọ nke gị mma. Dị nnọọ pịa Dezie ka ubi, ewepụtụ ma ọ bụ igosi ihe ọ bụla ị chọrọ maka gị videos tupu akakabarede.
The akwado mmepụta formats na-categorized n'ime Favorite, Format na Ngwaọrụ. Ị nwere ike mfe agagharị site na họrọ mmepụta format na ị chọrọ. Dị ka ọmụmaatụ; ị nwere ike họrọ ika na nlereanya nke gị obere ngwaọrụ ozugbo dị ka e gosiri screenshot n'okpuru.
4 Gbanwee Ntọala
Ntọala ga-akpaghị aka-ga-a ndabere nke a na-atụ aro maka faịlụ gị. Otú ọ dị, ị nwekwara ike ịgbanwe ya aka site na ịpị Ntọala. Ịnwere ike iji aka ịgbanwe parameters iji kwekọọ gị faịlụ. Ozugbo mere, pịa tọghata! Weghachite gị converted faịlụ ozugbo ẹkụre ozi Pop elu na gị na ihuenyo.
Rịba ama: E nwere ihe ọzọ Download taabụ n'elu gị isi interface ebe ị nwere ike ibudata mmasịrị gị si online gụgharia saịtị.
XviD Cropper: Olee otú akuku XviD Files